Sidee u Wanaajiyaa Caafimaadka Kilyahayga?
Author Topic: Sidee u Wanaajiyaa Caafimaadka Kilyahayga? (Read 58059 times)
« on: April 23, 2015, 02:14:53 PM »
Kilyaha waa xubno muhiim ah jirka, qofka bini-aadanka la aantood ma helo karo caafimaad buuxa.
Kilyaha waxay jirka u taraan waxyaabo badan oo aan halkaan lagu soo koobi karin laakiin waxaa ugu muhiimsan kuwaan:
Qashi-saarka: kilyaha waxay sameeyaan kaadida iyadoo ay raaciyaan wixii qashin ah oo jirka dhibi kara in ay ka saaraan, caafimaadka wuxuu ku jiraa in qofka qashin-saarka kilyahiisa in ay sarrayso.
Isku-dheellitirka dareeraha jirka: Markuu qofku ooman yahay, kaadidiisa way yaraataa, markuu biyo ka dhargane kaadidiisa way badataa, dheecaanka jirka ku jiro waxa uu leeyahay macdan muhiim u ah oo ay kilyaha ka ilaaliyaan in ay kaadida soo raacaan, waana in cabbirka waxyaalahaas aynan is badalin hadduu qofka uu biyo cabo iyo hadduu ooman yahayba.
Kontroolidda dhiig-karka: kilyaha waxay ka qeyb qaataan oo muhiim u yihiin sidii cadaadiska dhiiggaaga ay u kontrooli lahaayeen oo waxay ka ilaaliyaan dhiig-karka ama in dhiiggu oo kaco, waxay soo daayaan dheecaanno dhiigga kor u qaadi karo ama hoos u dhigi karo iyadoo ku xiran xaaladda aad ku sugan tahay.
Ka hortagga dhiig-yarida: kilyaha waxay kaloo ka qeyb qaataan in dhiigga ay sare u qaadaan iyagoo soo daaya dheecaanno la shaqeeyo dhuuxa lafta si loo soo saaro birta iyo unugyada cas oo jirka u baahan yahay, hadduu qofka ay kilyaha fadhiistaan waxaaa ku dhaco dhiig-yari.
Kontroolidda kaalsiyamka, vitamiin d-ga iyo hormoonno kalaba: kilyaha waxay kaloo kontroollaan oo ay jirka u habeeyaan ka faaidaysiga waxyaabo badan oo ay ka mid tahay maadada kaalsiyamka loo yaqaanno oo lafaha dhismahooda ka qeyb qaadato iyo fitamiinada qaar sida vitamiin d-ga oo haddii la waayo uu qofka ku dhici karaan lafo-burbur.
Qof kasta wuxuu ilaahay ku abuuray laba kilyood inkastoo ay dhacdo in dadka qaar ay hal killi ku dhalan karaan, waxayna ku jiraan qeybta feeraha ka hooseyso ee dhinaca dhabarka xigta, meelo kalane way ku jiri kartaa taas oo aan ahayn mid dabiici ah.
haddii labada kilyood mid fadhiisato ama howlgabto, hal mid qofka wuu ku noolaan karaa wayna qaban kartaa howsha midda kale, markuu qofka kilyahiisa ay howl-gabaan macnaheeda waxay tahay labada kilyood ma shaqaynayaan wuxuuna u baahnaanayaa in kilyaha badalkooda mashiin in lagu xiro jirka ka soo saaro qashinka iyo sunta, wuxuuna qofka u baahnaanayaa in kilyahiisa si joogto ah loo dhaqo ama in kilyaha laga badalo.
Halkaan ka akhriso qoraal ku saabsan Howlgabka kilyaha: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,1750.0.html
Halkaane ka akhriso qoraaal ku saabsan kaadi-saarista ama kilyo-dhaqista: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,1437.0.html
Sidaa awgeed ahmiyadda ay kilyaha jirka biniaadanka u leeyihiin iyo halista haddii ay howlgabaan, waxaa muhiim ah in qofka uu ku dadaalo sidii ay kilyahiisa caafimaad buuxa u heli lahaayeen inta uu noolyahay iskane ilaaliyo waxyaabaha halista ah oo dhaawici kara kilyaha.
Kilyaha waxa ugu horreeya oo dhaawac gaarsiiya waa fuuq-baxa ama oonka siyaadada ah sidaa darteed waxaa lagula taliyaa qofka in caafimaadka uu ku jiro inuu biyo caadi ah caadaysto siduu u cabi lahaa maalintiiba 8 koob oo biyo ah, weliba isagoo billaabayo subaxa hore. Tani waxaa ka mid ah inuu qofka badsado cunista cunnada ama khudaarta biyaha ku badan tahay sida qaraha, ananaaska, cinabka iyo wixii la mid ah.
Midda xigta oo kilyaha wax gaarsiisa waa haddu qofka uu leeyahay xanuun caabuq kilyaha oo uusan qofka iska daaweynin kuna raagay, fadlan halkaan ka akhriso qoraal ku saabsan xanuunkaas: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,3237.0.html
Midda ku xigta waa haddii aad qabtid xanuun kilyaha saameeyo kuwaas oo ugu badan dhiig-karka, sonkorowga, cagaarshowga, wadna xanuunka, taladu waa in aad xakamaysaa xanuunadaas adigoo raaca talooyinka takhtarkaaga, joogtane u qaato daawada laguu qoray, kilyahagaane si joogto ah aad u baartid heerka shaqada ay marayaan iyo in aad halis ugu jirtid in kilyahaaga ay fadhiisan rabaan.
Midda ugu dambeyso waa in aad iska ilaalisid in aad qaadatid ama soo gadatid daawo aanan kuu qorin takhtar, daawooyin badan oo waxaa jiro aanan u roonayn kilyaha, weliba qasab ay tahay in laga ilaaliyo dadka qaba xanuunada kilyaha dhaawici kara, fadlan la soco takhtarkaaga, kana fakar in aad daawo halis kilyahaaga ku ahayn aad u qaadan lahayd.
Iska ilaali cunista mukhaadaaraatka iyo maandooriyayaasha kilyaha saameeyo sida qaatka, sigaarka, khamriga iyo wixii la halmaalaba.
Shantaa talo haddii aad qaadatid waxaad ka badbaadi doontaa ilaahay idinkiisa sababaha ugu waaweyn ee keeni karo howlgabka kilyaha.
haddii aad caafimaad qabtid, sanadkiiba mar iska baar kilyaha adigoo iska qaada dhiig lagu ogaado shaqada kilyaha.
dad badan ayaa si qaldan u fahansan in computer la isi saaro oo uu sheegi karo in kilyaha ay shaqeynayaa, taasi wax ka jiraa ma jiraan, kumbuyuutarka waxuu sheegaa kaiya haddii kilyaha ay nabar ama buro ama barar ay leeyihiin ama dhagax uu ku jiro laakiin inay shaqeynayaa iyo heerka ay marayaan shaqo kuma lahan, taasi safiican u dhuux.
Waxaa jiro talo guud oo ugu dambeysa oo caafimaadka u roon oo ah in aad jimicsi joogto ah samaysid, in cunno isku-dheellitiran aad qaadatid iyo in aad miisaankaaga xakamaysid.
Fadlan badso cunnada faaida u leh kilyaha khaas ahaan kuwa ay ku yartahay maadada bootaasiyamka iyo foosfaytka sida kabbejka, tuunta, basasha, barbarooniga, tuffaaxa, cinabka, qaraha, saliid saytuunka, ukunta qebteeda cad, gallayda iyo kalluunka.
Intaasba waxaa ku jirto maadooyin kilyaha ku caawiyo qashin saarka iyo howlaha kale ay qabato.
Haddii ay jiraan su'aalo aad ka qabtid qoraalkaan ama faahfaahin aad u baahan tahay noo soo gudbi
Re: Sidee u Wanaajiyaa Caafimaadka Kilyahayga?
« Reply #1 on: October 21, 2016, 10:51:41 PM »
Waxad sheegtay in la badsado khudaarta potassium-ku ku yar yahay,
Potassium-kuna sida la ogyahay wuxu ku badan yahay muuska,
Muuskana faaiidadiisa iyo waxtarkiisa waa la amaanaa oo waa la isku dhiirigeliyaa in cunidiisa la joogteeyo.
Markaa sidee isu waafaqayaan taas?
Views: 9097 February 22, 2010, 12:47:32 PM
Views: 21715 December 21, 2009, 07:54:40 PM
Views: 13006 March 10, 2011, 06:10:21 PM
Views: 7982 December 05, 2011, 11:25:44 PM